रातमा काम गर्दा क्यान्सर…? | नेपाली जनता :: Nepali Janta: Nepali News Portal
रातमा काम गर्दा क्यान्सर…?
प्रकाशित मिति २७ पुष २०७४, बिहीबार ०८:५१ लेखक Nepali Janta
काठमाडौं । संसारमा कैयौँ यस्ता संस्था छन्, जहाँ रातको समय काम गर्नुपर्छ । नाइट सिफ्टमा पुरुषले मात्र नभएर महिलाले पनि काम गर्छन् । तर, लामो समयसम्म नाइट सिफ्टमा काम महिलाका लागि खतरा हुने चीनमा भएको एक अनुसन्धानले बताएको छ । नाइट सिफ्टमा लगातार काम गर्ने महिलामा विभिन्न क्यान्सरको सम्भावना बढेर जाने अनुसन्धानले देखाएको छ ।
Post View Count: 91
लोकतन्त्रको रक्षा र राष्ट्रियताको सुदृढिकरणका लागि पनि नेपाली काँग्रेस, सक्रिय बन्न कार्यकर्तालाई निर्देशन
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसले प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा सक्रियतापूर्वक परिचालित हुन…
३३ केजी सुन काण्डमा मुछिए एसएसपी, गृहले बनायो छानविन समिति !
काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले तस्करीको साढे ३३ केजी सुन काण्डमा प्रहरीको शंकास्पद भूमिका देखिएको भन्दै अनुसन्धान गर्न डिआईजी पुष्कल…
ईशनाथ नगरपालिका-१ मा कांग्रेसको प्यानल नै विजयी
रौतहट । ईशनाथ नगरपालिका वडा नम्बर १ मा नेपाली कांग्रेसको प्यानल नै…
डिभोर्स भएपनि समाजले श्रीमतीलाई जवर्जस्ती बसाइयो पतिको किरियामा
बिर्तामोड । छोडपत्र (डिभोर्स) पछि काजकिरिया कस्तो बिडम्बना । हाम्रो समाज अझै पनि १८औं शताब्दीमा रहेछ भन्ने पुष्टि भएको…